Shiinaha Sanka Waalka, Bulk Melter, Warshadda Muuska Dhalalka Muhiimka ah ee Falcelinta, CE Iyo Soo-saareyaasha - Tiknoolajiyadda Daarista (Zhejiang) Co., Ltd.
Our 5mm silig core sanka laba jeer isku laablaabmay 10 jeer oo aan kala jabin. Waxay ka gudubtay heerka shahaadada caalamiga ah ee SGS waxayna leedahay ROHS ilaalinta deegaanka, gaarto sun aan sun ahayn, iska caabin laabaya iwm.
4mm 100% PP silig sanka ah oo aan soo saarnay ma lahan wadajir iyo gunti. Waxay dhaaftay heerka shahaadada caalamiga ah ee SGS iyo ilaalinta deegaanka ee ROHS, waxay gaaraysaa sun aan sun ahayn, laab laaban iwm.
5mm 100% PP silig sanka ah oo aan soo saarnay ma lahan xariiq furan iyo dhamaad jaban. Waxay dhaaftay heerka shahaadada caalamiga ah ee SGS iyo ilaalinta deegaanka ee ROHS, waxay gaaraysaa sun aan sun ahayn, laab laaban iwm.
5mm 100% aluminium xarig xarig silig ah wuxuu leeyahay ductility wanaagsan, ilaalinta deegaanka geedi socodka koollo dhalaalka kulul, nafwaayay xoog, SGS heerka shahaadada caalamiga ah, ROHS ilaalinta deegaanka, gaaraan non-sun ah, iska caabin laabanto iyo wixii la mid ah.